Jasiiradda Ohana: Ubax qarxi oo dhis khiyaamo&Hack – Talooyin Cheats Android
Jasiiradda Ohana: Ubax qarxi oo dhis khiyaamo&Hack
Iska ilow dhammaan buuqa iyo mashquulka magaalada, oo ku noolow nolol ka fog werwerka ciyaarta cusub ee u dhigma “Jasiiradda Ohana”🏝️!
Riix daaqadaha furan, neefso hawo nadiif ah, oo ku raaxayso xujooyinka & ubaxyo jilicsan oo ku yaal dukaankaaga badda 🌴.
Ciyaar iyo qarax halxiraale, dhis oo naqshadee dukaankaaga, saaxiibo cusub samee, ku guulaysta abaal-marin, daaha ka qaad waxyaalaha qarsoon ee jasiiradda, oo noqo ubaxleyste hammi leh oo leh ciyaaro fudud oo madadaalo leh.
Dukaan samee oo ku noolow riyada jasiiradda rajada, jacayl, iyo farxad!
・🏝️Dukaanka ubaxa ee adiga kuu gaar ah: xalliya ciyaaraha halxiraalaha, hal-abuurkaaga sii daa, oo u naqshadee dukaanka ubaxa laga bilaabo dhar-dhalaal ilaa dhar-dhoobo, dhammaan sida aad jeceshahay! Ku rid alaabta guriga, ubaxyo koraan, quusto abaal marinta maalinlaha ah, oo xataa kor u qaado 😸 xayawaan🐶!
・🏝️Nashqada ciyaarta halxiraalaha gaarka ah: ciyaar & qarxiyay 2 halkii ciyaar dhaqameed-3! Soo hel tiro badan oo isku dhafan oo qarxa, hababka ciyaarta, iyo abaal-marinaha ciyaaraha. Ku martiqaad saaxiibkaa inuu ku ciyaaro muuqaalka xeebta & qarxin heerka ubaxa!
・🏝️Xiriiro kala duwan: dhaaftay 600 heerarka ciyaaraha isku midka ah ee garaac-ilaa-qarxa ee ay nashqadaysay MYBO, Kooxda horumarinta ciyaaraha ee caanka ah oo ay ROVIO ku casuuntay horumarkooda ciyaarta halxiraalaha iswaafajinta “Shimbiraha Cadhooday”.
・🏝️La kulan asxaabtaada & macaamiisha: ogow koox duurjoogta ah oo la saaxiib Lily Maka, Kiko Kilani, Lucas Macaan, iyo qaar kale.
・🏝️Baahiyo siraha: sahamin muuqaalada cusub ee jasiiradda, la kulan dadka xaafaddaada, oo ku raaxayso sheekooyinka quruxda badan ee u dhexeeya jilayaasha ciyaarta. Markhaati aroos jaceyl oo ku naqshadee goobta ubaxyadaada!
・🏝️ Dhacdooyinka todobaadlaha ah: keenaya heerar cusub oo loollan halxiraale ah si aad kor ugu qaaddo ciyaarahaaga & abaal marin hel!
・🏝️Ku ciyaar ciyaarta offline: halis ha u gelin inaad caajisto marka xigta ee aanad geli karin internetka, dukaankaaga fur, oo ku raaxayso heerarka halxiraalaha cusub meel kasta wakhti kasta!
Jeclahay ciyaarta Ohana Island?
Meet us on our websites and user bulshada for more up-to-date matching game information and rewards!
Waxaan ku faraxsanaan lahayn inaan ka jawaabno mid ka mid ah su'aalahaaga ama maqalno soo jeedinta. Fadlan iimayl noogu soo dir macluumaadka xiriirka:
Qeybta: Khiyaamo iyo Hack ama Talooyin Calaamadaha: Blast, Dhis, CheatsHack, ubax, Island, Ohana
← Ciyaarta Squid 3D 2022 – Khiyaamo&Hack Solitaire Tripeaks Isbeddelka – Khiyaamo&Hack →